NWB – Wo fi Ɔwεn Aban no Mu – 4Jehovah (Yehowa)
NWB – Wo fi Ɔwεn Aban no Mu
Ebinom fam no ԑte sԑ nea wofi owia ase akɔtɔ ogya mu, de wɔnho hyԑ nnurubɔne nom, ɔbraseԑ ɔkɔwensa ne nneyԑe afoforo mu. Ɔwԑn Aban Asafo ani gye ho sԑ wɔde saa nneԑma bɔne yi yԑ osuahu a ԑbԑto wɔn a wofi “Nokware no” mu. Ebinom nso a wofi mu no nya adwenem haw- a ԑhyԑ wɔn so kԑse. Ebinom fi ase sԑ wɔbԑhwehwԑ “Onyankopɔn Nokware Ahyehyԑde” ma wɔkɔ ɔsom ahorow nanso emu biara di wɔn huammɔ. Ebinom nso hu Ahyehyԑde bi anaa ɔsom akuw bi a ԑbԑyԑ sԑ ɔwɔ “Nokware Ankasa no”. Nnipa pii pa abaw wɔ ɔsom ahorow nyinaa ho ma enti wɔbɔ wɔn “bra a ɔsom mfa wɔnho’’ na mmom wɔde wɔn ani si wabusua, wadwuma ne wafie so a wompԑ sԑ wobesusuw Nyamesom ho koraa.
This post is also available in: Spanish Portuguese Czech Italian Russian German Borɔfo